Sadia Nour | Radio Himilo
All posts by Sadia Nour
Paris Saint-Germain oo u dhaqaaqday daafac ka tirsan Barcelona
January 20, 2021 Sadia Nour
Himilo – Paris Saint-Germain ayaa lagu warramayaa in ay u dhaqaaqayso laacibka kooxda Barcelona daafaca ugu ciyaara ee Emerson.
22 sano jirkaan ayaa si amaah ugu ciyaaraya naadiga Real Betis, isaga oo halkaasi saameyn wanaagsan ku yeeshay waxa uu dhaliyay hal gool halka uu caawiyay gool kale dhammaan tartamada fasal ciyaareedkan.
Emerson ayaa yimid Barcelona isaga oo ka imaaday naadiga Atletico Mineiro sannadkii 2019, balse ilaa iyo hadda ma uusan kasoo muuqan hal kulan oo uu u dheelayo Blaugrana.
Sida ay werineyso Sport, agaasimaha ciyaaraha PSG ee Leonardo ayaa la xiriiray xiddiga waxayna rajaynayaan in ay kusoo iibsadaan qiimo dhan €25milyan oo Yuuro.
Himilo – Haweeney ku sugan faransiiska, waxay isku dayaysay inay dunida u caddeyso saddex sano inay nooshahay kaddib markii sannadkii 2017 la shaaciyay inay dhimatay.
Jeanne Pouchain oo 58 jir ah waxay sheegtay inay ku sugneyd cabsi joogto ah, waxay xustay inaysan ku dhiiran jirin inay gurigeeda oo ku yaalla Loire ay meel uga baxdo. xukunkeeda lagu sheegay dhimashadeeda ayaa si qaldan u dhacay.
Maxkamad ku taalla Lyon ayaa horey u sheegtay inay Jeanne dhimatay, wixii intaa ka dambeeyay waxaa loo haystay inay mootan tahay, balse waxaa jiray muran ku saabsan inaan la hayn shahaado caddeyneysa geerideeda.
Saddex sano kaddin maxkamad ayay u aaday inay caddeyso inay nooshahay. Dhibaatooyinka ay wajahday saddexdii sanno waxay ku sheegtay inaysan lahayn akoon, caymis caafimaad iyo wax aqoonsi ah.
Liverpool iyo Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya xiddig ka tirsan Inter Milan
January 19, 2021 Sadia Nour
Himilo – Liverpool iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu warramayaa in ay daneynayaan laacibka kooxda Inter Milan khadka dhexe ugu ciyaara ee Nicolo Barella.
Sida uu werinayo warsidaha reer Italian ee Calciomercato, kooxaha Premier League ayaa xiisa u haya xiddigan Barella.
23 sanno jirkaan ayaa si joogta ugu biiray Nerazzurri xagaagii tegay, kaddib markii uu amaah uga yimid naadiga Cagliari.
Si kastaba qandaraaska Barella waxa uu ku egyahay sannadka 2024, koox kasta oo dooneysa ayaa kula saxiixan karta qiimo dhan €40.5 milyan oo Yuuro.
Danny Drinkwater oo ka tegaya Chelsea
January 18, 2021 Sadia Nour
Himilo – Chelsea ayaa xaqiijisay in Danny Drinkwater uu si amaah ah ugu biiray kooxda reer Turkey ee Kasimpasa ilaa laga gaarayo dhammaadka fasalkan.
Daafaca qaranka England ee Drinkwater ayaa Chelsea kaga soo biiray Leicester qiimo dhan £35million xagaagii 2017, laakiin waxa uu Stamford Bridge kasoo muuqday 23 kulan.
“Danny Drinkwater waxa uu si amaah ah ku bixi doonaa Kasimpasa inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. Nasiib wacan Danny!” ayaa lagu yiri qoraal ay Chelsea boggeeda Twitterka soo dhigtay
Drinkwater ayaan kooxda koowaad ee Chelsea kasoo muuqan tan iyo 2018 ciyaartii Community Shield kulankaasi oo ay wajaheen Manchester City.
Himilo – Stefan Thomas wuxuu haystay qiyaastii $220 milyan oo ah lacagta digitalka (Bitcoin). Muddo yar gudaheed ayuu ku waayay hantidaas kaddib markii uu dhawr jeer ku cel-celiyay password qaldan.
Wuxuu isku dayay siddeed inuu helo lambar sireedka saxda ah balse nasiib darro uma aysan suura galin inuu helo warqaddii ay ugu qornaayeen xogaha muhiimka ah ee uu u baahnaa iyo Password-ka.
Mr Thomas wuxuu sheegay inay dhacdadan bartay casharro muhiim ah, Inkastoo uu waayay fursad uu milyineer ku noqon lahaa haddana wuxuu aaminsan yahay inay ahayd dhacdo aayo-tiinkiisa dambe saacidi doona.
ABC7 News, wuxuu u sheegay inay ahayd maskax-dhallaalin wayn oo noloshiisa inta ka harsan wax badan ka beddeli doonta.
Manchester City oo qiimo sare ku dooneysa Romelu Lukaku
January 17, 2021 Sadia Nour
Himilo – Manchester City ayaa lagu soo warramayaa in ay doonayso soo qaadashada weeraryahanka Inter Milan ee Romelu Lukaku.
Citizens ayaa la filayaa in ay dukaameysi sameeyaan dhammaadka ololaha 2020-21, kaasi oo ay ku doonayaan weeraryahan cusub, waxaana loo arkaa beddelka gooldhaliyaha ugu sarreeya kooxda ee Sergio Aguero.
Sida ay werineyso The Telegraph, City ayaa diyaarineysa £200m si ay xagaagan u hagaajiyaan safkeeda waxaana ka qeyb ah xiddiga Lukaku.
Laacibka qaranka Belgium ayaa dhaliyay 51 gool isaga oo kooxda reer Italy u ciyaaray 73 kulan oo ay ku jiraan 17 gool oo ololahaan 2020-21 ah markii uu saftay 22 kulan dhammaan tartamada
Himilo – Saca ayaa ku jiray guriga gowraca ee la geeyo lo’da la doonayo in la qalo. Waxaa la arkay isaga dhex meereysanaya magaalada Salzburg kaddib markii uu ka soo baxsaday kawaankii lagu hayay.
Haweeneydii lahayd oo isku dayaysay inay qabato balse ay u suura gali wayday waxay dhacdadan ku wargelisay hay’adda Gut Aiderbichi ee ka shaqeysa u sama falidda xayawaanada.
Hay’adda waxaa u suura galay inay badbaadiso saca argagaxsanaa. Geesta kale hay’addu waxay milkiilaha u sheegtay inay siin doonto mag-dhawga dhaqaalaha uu ka heli lahaa hilibka saca.
Sacan oo lagu Magacaabo Lieni waxaa loo oggolaaday inuu si farxad leh ugu noolaado beer ku taalla Austria kaddib markii ay soo fara-galisay arrintiisa hay’adda samafalka.
Arrimaha Bulshada, Habka-Nolosha
January 16, 2021 Sadia Nour
Himilo – Dhammaan lammaanayaasha ku nool magaalada Changwon ee dalka Koonfurta Kuuriya waxay helayaan 100 milyan oo lacagta dalkaas ah una dhiganta 92,000 oo Dollar. Siismadan waxaa heli doona keliya kuwa leh carruurta.
Warbaahinta South Korean network ee loo soo gaabiyo KNN ayaa tebisay sheekadan, waxaa lagu sheegay in lagula dagaalamayo hoos u dhaca bulshada gobolka iyo waddanka oo dhan.
Haddii lammaaneyaashu ay leeyihiin hal canug daymaha lagu leeyahay boqolkiina 30 waa laga cafin doonaa, haddii qoyska ay u joogto saddex canug daymaha oo dhan ayaa laga cafinayaa.
Waaxda qorsheynta ee gobolka magaalada Changwon ayaa laga soo xigtay in siyaasaddan ay tahay curis cusub oo lammaaneyaasha iyo dhalashada badin doona sida laga filayo.